Kutenderera nyama yemombe nehowa howa hwakapfuma uye yakapusa dhishi | Kicheni Mapepa
Kutenderera nyama yemombe nehowa
Montse Morote | | General, Zviitiko zvakakosha, Kisimusi mabikirwo
Isu takatotanga nekudya kwemapato aya, apa ndinokusiira zano rangu re yakakomberedza nyama yemombe ine howa. Chikafu chakakwana chemazuva ano, icho chatinogona kugadzirira pamberi, nekuti ndizvo zvatichapotsa. Saka ndagadzira dhishi iri nekukurumidza kubika, nyama yakapfuma uye yakapfava.
Kutenderera kweveal nema howa idyo yakanaka, inowanzo farirwa nemunhu wese, zviri nyore kugadzirira, Inoperekedzwa nehwahwa, kunze kwekuipa iyo yakasviba, inofamba zvakanaka kwazvo. Tinogona zvakare kuperekedza iyi dhishi neiyo shoma puree.
Recipe mhando: masekondi
Kutenderera kwemombe 1Kilo
Howa hwakaomeswa (30-40 gr.)
Fried tomato 3-4 mashupuni
Girazi rewaini chena 150ml.
Tinotora howa hwakaomeswa, tinoisa mundiro ine inodziya mvura, isu tichavasiya kwemaminitsi makumi matatu kusvika makumi mana.
Kunyange isu tichagadzirira iyo dambarefu. Isu tinoimesa, isa munyu uye mhiripiri.
Tichaiisa kune brown muhari nemafuta mashoma.
Kana iri yegoridhe, tinowedzera hanyanisi yakatemwa, tobva taisa tomato yakakangwa.
Tinotora mapepa mashoma uye tinowedzera waini chena.
Rega doro ripararire kwemaminetsi matatu uye wobva wawedzera kapu yakagadzikwa zvakanaka yeupfu.
Tinomhanyisa zvese zvakanaka kusanganisa hupfu uye nekuvhara nemvura. Isu tinodurura howa tisina kukanda mvura kubva mairi, tinovawedzera muhari.
Tichawedzerawo girazi diki remvura howa muhari, ichapa nyama yakawanda yekuravira.
Isu tinovhara poto, panotanga kubuda chiutsi tinoisiya yakadaro kwemaminitsi makumi maviri tobva tadzima.
Kana hari yatonhora tinoivhura.
Kana usiri kuzoshandisa iro zuva rimwe chete, riise mufriji pasina kucheka. Uye kana uchizoishandisa, tichaicheka toiisa mupoto ine muto, tichairavira nemunyu uye kana uchiifarira yakasimba nehwewa hwehowa unogona kuwedzera mamwe mvura kubva kuhwahwa.
Iyo inonaka uye yakanaka dhishi ine yakapfuma kwazvo howa hwema uye kana iwe uchida kuiperekedza ne puree ichaita zvakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » General » Kutenderera nyama yemombe nehowa
Mhoro, zvinotaridzika zvakanaka kwazvo uye ndinoda kuzviedza. Handina wekubika nekukurumidza. Ini ndinogona kuigadzirira mune casserole? Nguva yekubika nyama, ingave iri yei?
Kana uchikwanisa kuzviita mune casserole. Ini ndazoigadzirawo mucasserole asi iyo yekubika ingangoita kubva 1,30 kusvika kumaawa maviri, zvinoenderana neukobvu hwenyama. Nyama iyi inofanira kunge yakapfava kuti ive yakanaka.
Gingerbread makuki eKisimusi